USA, 16 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
Dowlada Maraykanka ayaa sheegtay inay fiiro dheeraad ah u yeelan doonto dawooyinka laga keeno Hindiya ka dib markii ay baadhitaan ku ogaadeen in dawooyinka Hindiya laga keeno aanay qaarkood dawoba ahayn.
Hay'ada baadha dawooyinka Maraykanka oo la yiraahdo F.D.A ayaa sheegtay inay la yaaban yihiin sida dowlada Hindiya u ogolaatay in la dhoofiyo dhagaxaan dawo loo ekeysiiyey.
Sanadkii hore ayay hay'ada F.D.A waxay ganaaxday shirkada ugu weyn ee dawooyinka soo saarta dalka Hindiya oo la yiraahdo Ranbaxy 500 milyan oo doolar, ka dib markii la ogaaday in dawooyinka ay sameyso shirkadaasi ay ku dhex qaldaan dawooyin been ah.
Waxaa kale oo laga mamnuucay Maraykanka dawada lagula dagaalamo bakteeriyada ee antibiotic loo yaqaano in laga keeno Hindiya.
Dowlada Uganda ayaa iyana joojisay inay Dawada Kansarka ka soo iibsato Hindiya, ka dib markii ay ogaadeen in dawadaasi ay 0% dawo tahay. Benjamin Mwesige oo madax ka ah qaybta kansarka ee cisbitaalka Kambaala ayaa sheegey inay ka fiirsanayaan talaabadii ay qaadi lahaayeen oo ay ka mid tahay inay maxkamada aduunka ka dacweeyaan shirkadaha soo saara dawooyinka Hindiya.
Dr. Ishaq Geer oo ah professor wax ka dhiga kuliyadda caafimaadka ee Kashmir ayaa isna sheegey in aanu muddo la seexan murugo iyo tiiraanyo ka dib markuu ogaaday caruur yaryar oo loo malaynayo in la daweynayo laakiin waxa la siinayey ay ahaayeen dawooyin fake ama been ah. Wuxuu kaloo tusaale u soo qaatay haweeney qaliin weyn lagu sameeyey ka dibna dawada la siinayey si ay infection uga ilaaliso ay ahayd dawo beenaad, dhimashadii haweeneyda ka dibna uu baadhitaan ku ogaaday in aanay dawo ahaynba.